10 Foornooyinka ugu Fiican Si Isku day In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Foornooyinka ugu Fiican Si Isku day In Europe
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 07/06/2020)
Socotada la ilig macaan, fiiro gaar ah! Waxaad laga yaabaa in aan ku fikiray in ay safraan Europe kaliya aawadood oo isku dayaya baxay macmacaan, laakiin waa in aad. Europe ayaa qaar ka mid ah macaan cajiib ah in aad ku soo dejin doonaa oo u dhaw in ay dhaqanka dalka aad sahaminta. Plus, waxay ku farxi doonaa shaki kaaga. Maxaa in aan ku jeclahay?
Haddii fikradda codadka xiiso ku filan in ay isku dayaan iyo aad u yaabsan halkaas oo si aad u bilowdo, Oo ha isku dhibin. Si lagaaga caawiyo go'aan, waxaan sameeyay liiska macaan oo ka mid ah 10 Foornooyinka Best in ay isku dayaan on safarkaaga in Europe. Aynu leeyihiin aragti dhaw, iyaga at:
1. Amsterdam, The Netherlands - My patisserie Little
Waa dhif ah in ay la kulmaan iyo sidoo kale-dhigay macaanayd Faransiis dalalka kale, laakiin walwal lahayn - dubi jiray waa Faransiis. My patisserie Little ayaa bixiya dhammaan noocyada kala duwan ee ilig macaan farxaan Faransiis, oo ay ku jiraan chouquettes iyo eclairs, ka mid kale u gaarka ah.
Iyada oo design dhaqanka Faransiis, My patisserie Little dhammaataan jeesasho ruuxa France goob Holland. Waa maxay more, Waxa kale oo ay isticmaalaan cuntada dhaqanka Faransiis aan guraynin si ay u qanciso jamasho aad. Ha meeshan aan ka maqnaan haddii aad isku aragto in Amsterdam!
xasho Tani waa xaalad kale oo u muuqda kalluunka-out-of-biyaha, sida ma aha oo dhan ku saabsan ee la dubo Talyaani. halkii, Golaha Bakery ku takhasusay cupcakes, war abuurashadoodii ah si adag American jecel yahay in uu noqon karaa sidaas delicious aad marnaba ma waayi doonaa in uu ka tago.
Waxa ugu fiican oo ku saabsan Bakery House waa kala duwan ee dhadhan, ugu yaraan meesha ku hari dhadhan aad ka welwelsan tahay. Laakiin tan iyo markii ay macquul aheyn oo kaliya in ay isku dayaan mid cupcake, jirka xeebta ma mahadsanid doonaa. Si kastaba ha ahaatee, cupcakes, kuwaas oo laga yaabo in ay ku kacaya qarash ah dhawr saacadood oo dheeraad ah in jimicsiga ay gubaan off calories ah.
Haddii aad tahay qof u xiisootay si adag Talyaani macmacaan, Biscottificio Innocenti aadan niyad jabin doonaa. Waxaa si dhab ah u qalmaa in ay meel ka mid ah 10 Foornooyinka Best in ay isku dayaan on safarkaaga si ay biscotti Europe mahad. Waa dukaan yar oo leh foorno weyn oo soo saarta buskudka ugu macaan ee aad noqon doonto isku day Talyaaniga.
Oo ma waxaad ka heli doontaa la karinayo iyaga meel kasta for - Biscottificio xajiya waxyaalaha qarsoon ay. Hubi in muunad ay Brutti ma Buoni. Waa buskut ah qaabeeya sida Ahraamta ah in aadan awood u yeelan doonaan in ay ku filan.
4. Paris, France - Rooti Oo Fikradaha Qaar ka mid ah
Magaca this xasho PSG cajiib ah tarjumayaa Kibis iyo Fikradaha, taas oo ah magac loo waxyooday, waayo, cuntada u Waxyoon. Oo intii ay magaca uu tusinayaa takhasuska ah ee kibista, sidaas maaha oo dhan in ay bixiyaan.
Waxa kale oo aad ku raaxaysan karaan croissants ay! Kuwaas waxaa la dubo leeyihiin sumcad ah in ay croissants ugu fiican ee Paris. Marka in Paris, ma seegi mid ka mid ah dubayaasha ugu fiican Yurub.
5. Munich, Germany - Coffee maqaayadda Fast
Dadka reer Munich jecel dubo ay, oo taas waa iska cadahay ka la xiriira sare waxay leeyihiin waayo Konditorei Kaffee Schneller. Laakiin sababta ay mid ka mid ah 10 Foornooyinka ugu Fiican Si Isku day On Your Trip Si Europe?
Ka dib marka aad dhacd oo dhex ah dreadfully mashquulsan, -xumida iyo daalo Monday, aad u baahan tahay wax ay kor u jinni oo aad. Haddii aad tahay qof in Munich, Jawaabta been in delicious, dubo oo macmal ah. Waxaad findthose karaa kafeega si dhakhso ah, garab ah koob oo qabow iyo kulayl of cappuccino ama kookaha. More inta badan, ma waxaad u baahan doontaa cudur daar ah in ay dhamaan soo booqan.
Zurich waa meesha kama dambaysta ah si ay u eegaan, waayo, dubayaasha ugu fiican Yurub. Swiss ayaa waxay leeyihiin shokolaatada weyn iyo farsamayaqaanno cajiin, xataa si fiican hubaal inaad caddayn doonaa. Conditorei Schober waa mid ka mid ah dubayaasha ee aad ka heli karto ee "geeska macaan" of Town Old.
Waa dhaqanka-raadinta ah cafe yar in uu leeyahay qaar ka mid ah la dubo ugu yaab iyo shokolaatada handmade waxaad isku dayi kartaa. Qurxinta kufaraxsanahay, macmacaan weyn, iyo deyrka a in raaxaysan xagaaga - waxa aan u jeclaadaan?
Waxaan ma sameeyo Zurich weli! Waxaa jira hal meel mudan in la xuso on liiska dubayaasha ugu fiican Yurub. Loo arkaa cafe ku prettiest magaalada, Confiserie Sprungli waa arrin caanka ah ee Zurich.
qaaska ah ayaa iyaga uumay caanka ah waa Luxemburgli ah makronfyll, laakiin shukulaatada waa cajiib iyo sidoo. gaarka ah ay yihiin Hubi in aad samaysay dareenno dhan gabyi. Waxaad booqan kartaa Sprungli Confiserie oo aan isku dayaya baxay macarons Luxemburgli!
8. xasho Danish - Kaffehuset - Copenhagen, Denmark
Waxaad ma u sheegi kartaa dubo aan garashada sida xirfad hayadda yihiin taas oo ka dhigaysa. Taasi waa sababta ay la yaab ma laha in la helo xasho deenishka ka Copenhagen ka mid ah dubayaasha ugu fiican Yurub. Kaffehuset waa tartamaya tirsa waayo, meesha, oo ay mahad ku guuleysan in la dubo afka-waraabiyo ay.
ardaydu waxay Kobanheegan naxa Kaffehuset ee formaajaha, sida uu yaqaan in ay noqon formaajaha ugu farxad iyo ugu delicious ee magaalada. Waxaad isku dayi kartaa in ay iska caabin ay jaceylka, laakiin doonnaa in aad u badan tahay guul darreysato - noqon doonaa mid aad ugu faraxsanahay in aad ku samaysay.
xasho European kale out-of-France in ay magaca ka dhigay on farxaan macaan Faransiis, Lauderee aad enchant doonaa. London meeshan Khayrja, oo aad mar doono waa idin soo booqan London markii ugu horeysay.
Macarons waa ay qaas ahaan, oo aadan awood u yeelan doonaan in ay gooni u sheeg ka dhigooda Faransiis. cream The gudaha macaron dhalaali doonaa afkaaga ka dib marka aad kulanka qolof pastel-midab leh ee. Waxa aanu aad u hesho wax ka khayr badan in!
Demel waa aasaaska a macmacaan caanka ah ee Vienna sabab ah - kibis ay. The Ana Demal Torte waa shukulaatada showstopper ah heer in uu yahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee sumcad kaamil Demel ee.
Demel waa ka badan oo kaliya jecel dalxiis - taariikhdeeda waa ka badan 230 sano dheer, taas oo soo jiidasho leh oo cajiib ah. Qaar ka mid ah u gaarka ah ee aad ku raaxaysan karaan waxaa jira cake Walnut, Esterhazy cake, Sachertorte, iyo Dobos cake. In gaaban, haddii aad raadineyso weeyna aad dose maalin walba of cake, eegi jirin dheeraad ah ka badan Demel.
Ready in ay la ilaawi karin ah (iyo delicious) fasaxa qoyska oo idil? Booqo tobankii dubayaasha ugu fiican Yurub ka our liiska, iyo doonnaa in aad la Rujiyo. Hubi in ay qorsheeyaan aad fasax iyo jartaan tikidhka tareenka aad waqtiga!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Foornooyinka ugu Fiican Si Isku day On Your Trip Si Europe ” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-best-bakeries-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#dubayaasha #xasho #lamadegaanka #cajiin London travelamsterdam travelaustria travelfrance travelgermany travelnetherlands travelswitzerland